एकपटक त कोसीमै लगेर प्लेन …….. – Online Khabar 24
कामको सिलसिलामा केही दिनअघि मात्रै काठमाडौं आएको थिएँ।
नयाँ सचिव सरुवा भएर सोमबार मन्त्रालयमा आउने जानकारी पाएको थिएँ। त्यही भएर बिहानको पहिलो फ्लाइटबाट विराटनगर फर्किने र नयाँ सचिवलाई स्वागत गर्ने योजना बनाए।
बिहान ८ बजेर ५ मिनेटको बुद्ध एयरको फ्लाइट थियो। मैले जहाजको ‘सिक्स ए’ को टिकट ४ हजार ९ सय रुपैयाँमा किनेको थिएँ। एकदमै आरामदायी ढंगले काठमाडौं छोड्दै प्लेन विराटनगरको आकाशमा प्रवेश ग¥यो। परिचारिका (क्रु मेम्बर)ले केही क्षणमै विराटनगर एयरपोर्टमा जहाज ल्यान्ड गर्न लागेको जानकारी गराइन्।
सिट बेल्ट बाँ’धेर विराटनगर एयरपोर्टमा ओर्लने तरखरमा सबै यात्री थियौं। त्यहीअनुसार ‘माइन्ड सेट अप’ पनि भयो। प्लेन ल्याण्ड गर्न खोज्यो, तर ल्याण्ड हुन सकेन। र, फेरि माथितिर उड्यो। आकाशमा राउण्ड लगाउन थाल्यो।
त्यसपछि भने मनमा चिसो पस्यो। प्राविधिक समस्या भनेको के कस्तो हो ? भन्ने अनेक कुरा मनमा खेल्न थाले। यसो बाहिर हेरेको त, कोसी नदी देखँे। जहाज नै नचलेको जस्तो भयो। अनि, सिट सँगैको साथीलाई सोधे, जहाज स्थिर भइरहेको हो र ? ती साथीले जहाज उडिरहेको छ भन्ने जवाफ दिए। मन अलि शान्त भयो। नत्र, मलाई त कोसीमै लगेर प्लेन ब्ला स्ट गर्न खोजेको हो कि जस्तो लागेको थियो। क्रिउ मेम्बरलाई के भइरहेको छ भनेर सोध्थ्यौं।
सामान्य टेक्निकल समस्या हो, रिस्क लिन नचाहेर काठमाडौं फर्केको भन्ने जवाफ दिने गर्थे। क्रु मेम्बर पनि एकदम नै प्रोफेसनल थिए। उनीहरूले यात्रीलाई सान्त्वना दिइरहन्थे। तर, पनि उनीहरूका आँखामा डर भने पक्कै देखिन्थ्यो। उनीहरूले सम्झाउँदै गरे पनि मनले मान्दैनथ्यो। अरू यात्रीहरूका अनुहार पनि अ र डराएको जस्तो देखिन्थे। अनि, मन शान्त पार्न क्रु मेम्बरलाई बारम्बार सोधिरहन्थ्यौं।
नर्मल ल्यान्ड गर्ने हो भन्ने जवाफ पाउँथ्यौँ। काठमाडौं प्रवेश गरिसकेपछि मन अलि शान्त भयो। तर, ल्यान्ड गर्न खोज्दा विराटनगरकै जस्तो भयो। एयरपोर्ट सबै खाली थियो, तर ल्यान्ड गर्न सकेन। प्लेन पटक–पटक आकाशमा घुम्न थाल्यो।
अनि, सबै यात्रु आत्तियौँ। केही साथीहरू चि’च्या’उन र रुन थाल्नुभयो। हाम्रो जीवनको सुरक्षा आफैं गर्छौँ भन्दै झ्याल खोलिदिन आग्रह गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरू झ्यालबाट हा’मफा’ल्छौं भन्न थाल्नुभयो। त्यो कुराले झन् डर लाग्यो। एयरपोर्टमा नेपाली सेना, सुरक्षाकर्मी, फायर फाइटर तैनाथ भएको देख्यौँ। त्यसपछि त डरले थु’र्थुर नै भयौं। फो’र्सल्या’न्ड गर्ने तयारी रहेछ भन्ने सोच्यौं। केही पछि, प्लेन रनवेको सीधा गयो। अब भने ल्यान्ड गर्न सक्छ भन्ने भयो।
यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । (प्रदेश १, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख गोविन्दराज आचार्यसँग गरेको कुराकानीमा आधारित।) यो खबर पुर्ण रूपमा इताजा खबर डटकमबाट साभार गरियको हो ।
Prevअब सवारी धनीले ब्लुबुक बोक्न नपर्ने, यसरी हुन्छ अब चेकिङ्ग: हेर्नुहोस…
next१८ वर्षीय पुष्पा लिम्बूको ज्या’न लिने प्रेमी सार्वजनिक !